Zuru Oke Nkata Email Email | Martech Zone
Zuru Oke Nkata Email Email
N'oge na-adịbeghị anya anyị na-ekerịta ihe ọmụma na-enye ihe akaebe na ngwa ngwa a onye na-ere ahịa weghachite oku nye onye ahịa na-atụ anya site na weebụ, ọnụego ntụgharị dị elu. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, n'otu usoro mgbagha ahụ… folks na SaleCycle achọpụtala na ngwa ngwa ị nwetara ụgbọ ibu azụmahịa gbahapụrụ ozi zitere, nke dị elu karịa ọnụego mgbanwe!
Enwere ajụjụ atọ dị mkpa gbasara ozi ịntanetị ịhapụ nkata na SaleCycle gara n'ihu na-aza:
Oge oge: Ogologo oge ole ka anyị kwesịrị ichere ịkpọtụrụ ndị ahịa anyị?
Ụda: Kwesịrị ịbụ onye ziri ezi, ma ọ bụ jiri ụda olu ndị ahịa?
content: Kedu ihe anyị kwesịrị itinye na email iji mee ka ndị ahịa anyị zụta?
SaleCycle tinyere Infographic a nke na-aza ajụjụ ndị a. E jidere data site na 200 na-eduga ụdị ụwa niile na omume ha kachasị mma na ịhapụ ịzụ ahịa ịzụ ahịa:
Tags: gbahapụrụ emailagbahapụ nkataomume kacha mmaemail ecommerceemailire ereịzụ ahịa ịzụ ahịa gbahapụrụ
Ebumnuche na-aga nke ọma maka Mmasị Ahụhụ
Atụmatụ ezumike na mbadamba ụrọ & Mobile
Keith Eastman nke Abụọ
Dee 16, 2012 na 2: 11 AM
Doug post a di egwu! Na-agwa anyị ihe niile maka ịre ahịa email. Na-achọ atụmatụ dị mfe nke nwalere! Daalụ maka post!
Dec 16, 2012 na 10:36 PM
Daalụ @ google-b9b77ac949b0387c92d9cc6f0a228fc6: disqus, echere m ya!